ကြော်ငြာနံပါတ် S-8992597 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
**မွောကျဒဂုံတှငျ အိမျဆောကျနခေငျြသူမြားအတှကျ ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8982541 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🎊မွအေကယျြ-1.5ဧက 🎊 မွဖေို့ 🎊 အုတျခတျ 🎊နရောကောငျး 🎊ဥယြာဥျခွံမွေ 🎊 စကျ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8980669 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
​တောင်​ဥက္ကလာ၊ ပင်းယလမ်း၊ (5)ရပ်​ကွက်​၊ ​ပေ 20'x60'၊ PT၊ ​ရေ၊မီး။ ဂရန်​​မြေ။ ​ရောင်းရန်​ရှိပါသည်​။...
​တောင်​ဥက္ကလာပမြို့နယ်​၊ ပင်းယလမ်း၊ (5)ရပ်​ကွက်​တွင်​ ​ပေ 20'x60'၊ P...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8959266 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မွောကျဒဂုံ ဘုရငျ့နောငျလမျးမပျေါ( ၄လှာ)တိုကျခနျးအရောငျး
မွောကျဒဂုံ (၄၀)ရပျကှကျ ဘုရငျ့နောငျလမျးမပျေါ တိုကျသဈ(18x54)...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8982629 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
SMC5-002742, For Sale Mini Condo, ပထမထပ်၊ ၈ လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် မီနီကွန်ဒို တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိပါသည်။...
Located Area = 8 Street, Lanmadaw Township. Building Type =9Storey Floor...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8935455 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002269 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Pyae Sone Chan Thar Condo ( For Sale )
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002209 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကွယျစငျလငျး (အိမျခွံမွဝေနျဆောငျမှုလုပျငနျး) ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002176 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002141 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပအေကယျြ (17x54) မီနီကှနျဒို
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002114 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Myat Su Mon Construction Co.,ltd ပိတ်ရန်
VIP (2) ရပျကှကျ အမှတျ (4) လမျးမတနျးအနီး ပေ (60) ပတျလညျ မွကှေကျထောငျ့ကှကျ ရောငျးမညျ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002032 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မင်ျဂလာနရှေိ့သော နရေ့ကျလေးပါခငျဗြ........... ရှပွေညျသာမွို့နယျ ဗိုလျခြုပျလမျးမကွီးပျေါက မွကှေကျလေးနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြ ပါတယျ။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002031 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
RC (1) ထပျ အိမျလေး တဈလုံး ရောငျးပါမညျ ခငျဗြာ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002030 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရှပွေညျသာ အမှတျ(၈)ရပျကှကျ တှငျ ဈေးတနျတနျလေးနဲ့ အိမျပါမွကှေကျလေး လိုခငျြသူမြားအတှကျ အိမျလေးတဈလုံးပါ မွကှေကျလေး ရောငျးဖို့ရှိပါတယျ ရှငျ့ ~~~~ 🏠🏠...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002029 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်